တောပျော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » တောပျော်
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Aug 5, 2013 in Arts & Humanities | 33 comments
” တောပျော် ”
ငညို ငပြာ ရှိနေသမျှတော့
ကျုပ်တို့အပေါင်းအပါတွေ အတွက်
( လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းလေး ဆရာတော်နှင့် လိုက်ပြီး.. အင်တာနက်မရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်ပြီး ချက်ပြုတ်ရင်း ၀တ်ကြီး ၀တ်ငယ် ပြုစုတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသား လုပ်နေလို့ .. အသံတိတ် နေခြင်းဖြစ်၏ )
လူကလေး လာရင် ဖတ်ဘို့ …
ကျော်စွာခေါင် saysး
ကျွဲနဲ့လယ်ထွန်ကြတဲ့ ရှမ်းပြည်ဘက်ကို လွမ်းသွားတယ် အကိုကြီးရေ…
အကိုကြီးရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံများကိုလည်း၊ စာစီပါဦးခင်ဗျ…
ရှမ်းပြည်ဘက်မှာ ကျွဲနဲ့ လယ်ထွန်တာများတယ်.. ရာသီဥတုက အေးတယ်လေ..။ ကျွဲ နဲ့ ရာသီဥတု ကိုက်တယ်..။ ကျွဲက အပူ မခံနိုင်ဘူး ကိုကျောက်.. တချို့ ပူတဲ့ဒေသတွေမှာ ကျွဲနဲ့လယ်ဘဲထွန်ထွန် စပါးဘဲနယ်နယ် ကျွဲရဲ့ ကျောကုန်းပေါ်ကို ဆားတွေ ဖြူးပေးတာ.. ဆားက အပူခံနိုင်တယ်တဲ့..။
ကိုကျောက် ကျနော့်ကို ဘယ်လို ခြေရာခံမိတာလဲ ကျနော် မသိဘူး…း)
ကျနော်က တိတ်တိတ်လေး..နေ နေတာ..
ဆားပုလင်း ကျောက်ကျောက်နှင့် ခေါင်းမြီးခြုံ လုံပါပေ့ ကျော်စွာခေါင် အမှု…. ဆိုပြီးတော့…။
စာတွေ တော့ ဆက်ရေးမှာပါဗျာ…
တိတ်တိတ်လေးနေနော်…ပုံတူ ဆွဲပေးမယ်..းဝ)
( သူ့ လို လိုက်ရေးရတာ ဘယ်လိုကြီးမှန်းလဲ မသိ )
ကျွဲမြီးလေးဆွဲပြီး ကျွဲပေါ် တက်မို့လားးးး
ဟုတ်ပါတယ် ခဗျ.. တက်မှာပါခဗျ… ကျနော် ပြောနေစဉ်အတွင်းမှာဘဲ တဖြည်းဖြည်း တက်နေပါတယ်..
ဟော.. မြန်မာ ပရိတ်သတ်ကြီး မခိုင်မျှော်လင့်ထားသလို တဖြည်းဖြည်း တက်နေပါတယ် ခဗျ…။
သေချာပါတယ်.. သေချာပါတယ်.. အခုချိန်မှာဘဲ… မခိုင်ဇာဝင်းးးးး ပြောသလို တက်နေပါပြီ ခင်ဗျားးးးး…။။
ကျွဲပေါ်က ကလေးလေးနှစ်ယောက် ဥရောပသားလေးတွေနဲ့တူတယ်.. ကျွဲမြီးဆွဲနေတဲ့ကလေးကိုအသည်းယားလိုက်တာ.. နွားကိုမကြောက်ပေမယ့် ကျွဲကိုတော့တော်တော်ကြောက်တယ်.. မတော်လှည့်ခတ်လိုက်မှဖြင့်..
ကြောင် ကုတ်ခံမှာရော မကြောက်ဘူးလားဟင် ဟီ ဟိ…
ကြောင်အစစ်တွေက သူတို့ဖာသာသူတို့နေတာပါ.. ရွာထဲကကြောင်ကူလီကြီးသာ ရာသီမရွေး တစ်ချက်တစ်ချက် ကြောင်ရူးပြန်တာ..
ဥရောပ ကလေးတွေ မဟုတ်ပါဘူး… Crystalline ရေ..။
မြန်မာပြည်က ကလေးတွေပါ…။ ကျွဲက ဘေးကတက်တာ အန္တရယ် ရှိတယ်.. ခတ်တတ်တယ်.. ဒါပေမယ့် သူက နွားလို မကန်တတ်ဘူး.. ဒါကြောင့် နောက်က တက်တာ…။
ကျွဲကိုတော့ ဘယ်လောက်ယဉ်တယ်ပြောပြော မကပ်ရဲဘူးဗျို့…
နွားက ပွင့်လင်းတယ်.. ကျွဲက အမြုံစိတ် ခန့် မှန်း မရဘူး…
၂ခါလား စီးဘူးတယ်.. ကံကောင်းလို့မသေတာ.. တသက်စာ ကြောက်ရောဘဲ..။
ခုဘဲ ကောင်းနေတာ.. ခုချက်ချင်း တခုခုကို လန့် သွား၇င် စိတ်ရိုင်းထ၀င်တာ.. ပူတဲ့ ရာသီဆို ပိုဆိုးသေးတယ်..။
အဲဒီ ကျွဲတွေပေါ့.. အနော်ရထာဘုရင်ကို ရောသမ မွှေပစ်လိုက်တာ…။
ဆွဲနေတဲ့ ခ လေး က
ကျနော့်ဟာ ဆိုတဲ့ပို့ စ်မှာ သူပြောထားတယ်.. ကျွဲစီးတယ်လို့ လေ..။
ဒင်းက ငါ့အတင်း ပြောဒယ်ပေါ့လေ …
ငါ မန့်ဒုန်းက မမြင်လိုက်ဒို့ ဒင်း သက်သာသွားဒယ်မှတ် …
အေး .. အဲ့ဒါ ငါ ဆိုရင် …
နင်နဲ့ သဂျားက ဟိုနှစ်ကောင်ပဲ ဖြစ်မှာ …. ခွီးးးး
အရေးထဲ ဟိုလူဂျီးဂလည်း ဖြစ်နိုင်ဒယ် .. တဲ့ …
အတော် ဟုတ်နေဂျဒယ် … ဟွန့် .. တွေ့မယ် …
နွားဘဲ စီးဖူးဒယ် ….
ပုံထဲမှာ အလယ်က ကောင်လေးက
စပိုက်ဒါမန်း စတိုင်နဲ့ ခည .. မိုက်ဒယ် ..
အဲဒိ စပိုက်ဒါမန်းရဲ့ဘယ် ဖနာင့်နဲ့ တတန်းတည်းနေရာက ကျောလယ်က မြီးညောင့်ရိုးဘုက ကျွဲရဲ့ အရေးကြီးဆုံးနေရာဗျ…
အဲဒီဘုကို ခပ်နာနာ ခေါက်လိုက်တာတို့ရိုက်လိုက်တာတို့ လုပ်လိုက်ရင် မိုင်၁၀၀ နှုံးစပိ ပေါ့ဗျာ.. လီဗာ ခေါ်မလားးး..
ကျနော် သေမလိုဖြစ်တာ အဲဒီဘု .. ကြောင့်ပေါ့…
အကိုက ရှေ့ ကထိုင်ပြီး ကျနော့်ကို တက်ခိုင်းတာ ..ခုလို နောက်ကတက်တာပါဘဲ.. ထိုင်ပြီးကာစဘဲ ရှိသေးတယ် လက်ထဲက ရေပုံးကို နောက်ပြန်ကိုင်ပြီး နေရာချလိုက်တာ ဘုတည့်တည့်ကို ရေပုံအောက်ခံ သံခွေအစောင်းနဲ့ ထိပြီး ကျွဲလန့် ပြေးတာ…နောက်ကျွမ်းပစ်ကျပြိး..ကံကောင်းလို့ မသေတာ…။
အဲဒီကတည်းက ကျွဲရုပ်မြင်ရင် လန့် တာ.. ခုထိ နေပြည်တော်ဘက်ကို မသွားရဲတော့ဘူး..း)
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွဲမြီးဆွဲ လို့ ပြောရမယ်
တောသဘာဝ၊ ကျေးလက်မြင်ကွင်းကလေးတွေနဲ့ အတူ
ဒီပုံလေးကို ကြည့်ပြီး ရွာကို သတိရသွားတယ်… ဆိုတော့.. မန်းလေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ကို ဖျက်ပြီး အမျိုးတွေရှိတဲ့ ရွာကိုပဲ သွားလည်တော့မယ်…
ဒါနဲ့ ကျွဲပေါ်က လိမ္မော်လို အရောင်လေးတွေက ဘာသဘောလဲဟင်င် ခေါင်.. (ခွက်ဒစ်တူ လူကလေးမ)…
ကျနော့်ပန်းချီလေးကို ကြည့်ပြီး ရွာကိုပြန်လည်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိတဲ့ မြန်မာ လုံမလေးရဲ့ဇာတိကို ချစ်ခင်မှု…စိတ်ကလေးကို
ပင်ပန်းခြင်း ချွေးစက်တို့ ကို မက်မက်ရှိုက်ရှိုက် နမ်းယူခဲ့သော နေမင်းသည်.. ဆည်းဆာ ကမ်းပါးသို့ ဦးခိုက်ဝတ်တွားရန်
ဦးတည်ရင်း ပုဇွန်ဆီရောင် အလွမ်းတို့ဖြင့် တဲလေး၏ သက်ကယ်မြိတ်များ.. ကျွဲပုခုံးမွှေး ကြမ်းကြမ်းတို့ အား…ကျွဲတွင် ကပ်နေသော
ရွှံ့ မြေခြောက်တို့ အား.. သံယောဇဉ် အနမ်းတို့ ဖြင့်..လွမ်းစေခဲ့ပါသည်… လောင်… အဲ .. လုံ..။
ဟံမလေးးးးးးးး တဲ နဲ့ ကျွဲ နေရောင်ထိုးတာလေးကို မန္တလေးသိန်းဇော် စတိုင်လ် ပြန်ရှင်းပြရတာ မောထှာာာာာာာ.။
လှအားပါပေ့ မွေ့မွေ့ ပျော်ပျော်
ရွာကိုသတိရလို့ မြူးသွားတာ. ဟဲ ဟဲ
ကိုယ့်ကျွဲပန်းချီကားနဲ့ ပုပ္ပါးမယ်တော်ကြီး ဘယ်လိုများပါတ်သက်ပြီး ကြွလာတာပါလိမ့် လို့ ….
မြူးမြူး…အမေဗုံ မြူးလေ ရွာစီးပွားတက်လေပါဘဲ မယ်တော်ကြီး.. ဗုံဗုံ..။
ကျွဲပေါက်လေးနဲ့တူတယ်။ ကျမတို့ဒေသမှာလည်း ကျွဲတွေ၊နွားတွေနဲ့ လယ်ထွန်ကြတယ်။ ကျွဲတွေက တော်တော်စိတ်ရှည်ပြီးသည်းခံကြတယ်။ ကျွဲမြီးဆွဲတာတော့ခုမှမြင်ဘူးတယ်။
သူတို့က စိတ်ရှည်သီးခံပေမယ့် သူတို့ စိတ်ဖောက်ရင် ကြောက်စရာကြီး မလဲ့ရ..
ခုမှပဲ ကျွဲပေါ်တက်နည်း သိတော့တယ်။
ကြည့်ရတာ မဟာရာဇာတို့ အလက်ဆင်းတို့ သိကြားမင်းတို့တတွေ ငယ်ငယ်က ပုံထင်တယ်။ :loll:
အနော်တို့ အုပ်စု အဲလောက်လဲ ဆော့ပါဝူးဗျ
(အဲဒီထက် နည်းနည်းလေးပဲ ပိုဆိုးတာ )
အကိုတို့ က တရုပ်ပြေးမင်း မဟုတ်ဘူး
ကျွဲ ပြေးမင်း အုပ်စုဘဲ ဖြစ်မယ်..။
ကျနော် သင်ခဲ့တဲ့ ကျွဲတက်နည်းက အဲလိုဘဲ..။ မယုံရင် မမ စမ်းကြည့်..
ပြီးမှ ကျွဲပေါ်က ဘယ်လို ကျတယ်ဆိုတာလေး ပြန်ပြောပြပေါ့..။
ပြီးခဲ့ မေလက အောင်ပင်လယ်မှာ ကျွဲကို ဓါတ်ပုံသွားရိုက်တာ
အိုက်ထဲက ထပြီးလိုက်လာလို့ ထွက်ပြေးရတယ်။
ကိုယ့်ကို လူစိမ်းမို့ အကပ်မခံရင်..
နောက်တခေါက်ကျ… အနီဝမ်းဆက် ၀တ်သွားဗျ..။
ပြေး၇တာ ဒီ့ထက်ပိုမြန်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာဘဲ..။း)
( သွားမလုပ်နဲ့ နော်.. စ တာ.. အဟုတ်ထင်ပြီး တကယ်ဝတ်သွားမှဖြင့်…။ ဒုက္ခ )
မြန်မာပြည်ထဲ.. ဒီလောက်များတဲ့ကျွဲတွေရှိနေတာ… ကျွဲသားသိပ်မတွေ့ရပုံထောက်တော့..
ဧကဒ.. ဆတ်သားဆိုတာ.. ကျွဲသားဖြစ်နိုင်တယ်..။
မရဲဘဲ ကျွဲပြဲ စီးကြည့်ကြောင်း…
ပြောလို့ တော့ မရဘူးဗျ.. သူတို့ အသားတွေက ခပ်နီနီဆိုတော့.. ဆင်တယ်..။
ကျနော် စဉ်းစား၇ခက်တာက ကိုခိုင် …
ကျွဲပြဲ စီးတယ် ဆိုတာ ….
ဟို…အံဇာ မိုးဝင်းကလည်း သူ့ ပဲမြစ်လေး ထုတ်ပြပြီး… ကျွဲစီးတယ်လို့ ပြောတယ်.. ပုံထဲမှာ ကျွဲလည်းမတွေ့ ဘူးဗျ..။
ကိုခိုင်နဲ့အံဇာမိုးဝင်းစီးတဲ့…ကျွဲ…ပြဲ ဆိုတာ…အင်းးးးးတွေးကြည့်တော့..ရေးရေးပေါ်လာသလိုဘဲ ..ပြောတော့ဘူး..။